"Fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny Marina hamonjy ny tsy marina, mba hitondra antsika ho amin’Andriamanitra." 1 Petera 3:18
"Teo amin’izay nihabeazan’ny ota no nihoaran’ny fahasoavana be lavitra." Romana 5:20
Hoy ity mpamangy fonja, nitantara: “Tsy ho hadinoko mihitsy ity lehilahy nilaza tamiko hoe: namono olona aho, ary voasazy roapolo taona. Ekeko, satria ananan’ny fiarahamonina trosa aho. Fa rehefa ho voaloako ny trosako, araka ny fitsaran’olombelona, amin’ny fomba ahoana no hisehoako eo anatrehan’Andriamanitra? Atahorako kokoa ny fitsaran’Andriamanitra noho ny fitsaran’olombelona…”
Nampahory azy andro aman’alina ny fieritreretany, noho io fihetsika tsy azo iverenana io. Volana maro izy vao nahatakatra fa azo avela heloka, na dia nahavita izany fihetsika mahatsiravina izany aza. Amin’ny fomba ahoana ? Raha mibebaka izy, raha miaiky izany, ka mitodika amin’i Jesosy. Eny tokoa mantsy, “raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy (Andriamanitra) ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra”. Nahoana? Satria “ny ran’i Jesosy Zanany no manadio antsika ho afaka amin’ny ota rehetra” (1 Jaona 1:9,7). Hamaivanin’Andriamanitra ve ny fihetsika toy izany? Tsia. Matoa Izy manolotra famelan-keloka, dia satria voaheloka nisolo antsika ny Zanany: “Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan’Andriamanitra ao aminy kosa isika” (2 Korintiana 5:21). Niaritra ny famaizana Jesosy, na dia famaizana ny mpamono olona aza. Izay manatona Azy, na manao ahoana na manao ahoana toetrany, raha vesaran’ny fieritreretany, dia hahazo famelan-keloka sy fiadanam-po.
Tsy mpamono olona angamba ianao, kanefa mila ihany koa famelan-keloka avy amin’Andriamanitra: “Tsy misy marina na dia iray akory aza… fa tsy misy hafa, fa samy efa nanota izy rehetra” (Romana 3:10,22,23)… Ary ny olona rehetra dia afaka ny ho voavela heloka maimaimpoana, amin’ny alalan’i Jesosy Kristy.